Global Voices teny Malagasy » Manampy an’i Brezila Hanangana Ny Fahatsiarovana Varotra Andevo Ny Tanora Amerikanina Iray Mpanao Maritanàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Janoary 2016 8:15 GMT 1	 · Mpanoratra Public Radio International Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Avaratra, Amerika Latina, Brezila, Etazonia, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Tsenan'andevo tao Rio, manodidina ny taona 1824. Tompon-tsary: Edward Francis Finden/Wikimedia Commons
Ity lahatsoratr'i Christopher Woolf  ho an'ny The World  nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 29 Desambra 2015 ity dia navoaka eto indray ho ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Ahoana ny fampahatsiarovana fanandevozana sy ny varotra andevo?
Izany no fanontaniana nifikitra tamin'i Sara Zewde hatramin'ny naha- mpianatra azy, ary nahare ny amin'ny fandavanana ny inoana ho seranantsambo fanondranana andevo lehibe indrindra manerana an'i Amerika: Sisim-piantsonan'i Valongo, ao afovoan-tanànan'i Rio de Janeiro.
“Manana dikany sy ivon'ny tantara miampita an-tsofina Afro-Breziliana hatrany ny anarana Valongo,” hoy i Zewde, “ary izany koa no iverimberenany amin'ny hira sy ny fombafomba. Ary manana izany fijoroana izany ihany koa ny manodidina — karazana foibe ao amin'ny fombafomba Afro-Breziliana. Saingy tsy misy mahalala ny hitandroana ny ravarava. Tiako lazaina dia tsy misy ravarava akory. Tsy rava akory. Mbola eo ireo.”
Mahatalanjona tanteraka ny varotra andevo ao Brezila, ary nanakona tanteraka ny “varotra” tany Amerika Avaratra. Nandritra ny fotoanan'ny fanandevozana dia heverina fa maro kokoa ny Afrikana naondrana tao Rio irery noho ny manerana an'i Amerika Avaratra.
Vao napongatra indray ny sisim-piantsonana nampidirana andevo nandritra ny taonjato faha-19 ary nianjera tamin'i Sara Zewde ny hanoritsoritra bikam-pahatsiarovana iray eo amin'ny manodidina ny toeerana nisian'ity voina taloha ity.
Mpanao maritanàna (maritrano) endri-tany sady mpandravaka (mpahaibika) i Zewde, Amerikanina 29 taona, izay teraka tao amin'ny fianakaviana mpifindramonina avy any Ethiopia. “Mampahatsiahy mandrakariva ny tantara lavan'ny vahoakanay ry zareo,” hoy i Zewde. “Mampahatsiahy mandrakariva izany taloha malaza izany sy ny ampitso malaza ry zareo. Ka avy amin'ny alalan'izany fomba izany hatrany no nanaovako ny maritanàna sy niasako niaraka amin'ny olona isan-karazany.”
“Manana izany fahafaha-manao mamirapiratra izany avokoa ny rehetra,” hoy ravehivavy.
Voalohany nahatongavan'i Zewde tao Rio tamin'ny 2011 tamin'ny alalan'ny fanampiana hanao fikarohana valinteny Afro-Breziliana tamin'ny fahitana ara-arkeôlôjika indray an'i Valongo. Saingy rehefa hitan'ny mpikatroky ny fiarahamonina ny fahaizana manokana ananan'i Zewde amin'ny fanaingoana sy ny fanaovana marika amin'ny endritany, dia niangavy ireo ny hanampiana azy ireo amin'ny fananganana tsangambato. Nianatra tao amin'ny MIT sy tao Harvard i Zewde ary ankehitriny dia miasa ho an'i Gustafson, Guthrie, Nichol ao Seattle.
Saingy tsy mora izany.
“Mifandray akaiky amin'ny hetsika na trangan-javatra iray ny teny tsangambato sy ny endrika sy bika ampifandraisina aminy,” hoy ravehivavy. “Ady iray, maherifo iray, voina iray. Zavatra mivoaka ny fenitra. Saingy tsy hetsika na trangan-javatra iray ny varotra andevo niampita an'i Atlantika.”
Izany no fenitra, hoy ravehivavy, nandritra ny 400 taona. “Mbola hita amin'izao fotoana ny fiantraikan'izany. Ary vokatr'izany dia tsy zavatra azontsika tandrovina ho fotoana iray ao anatin'ny [fiainana].”
Tsenan'andevo lehibe indrindra tao Rio i Valongo nandritra ny fanombohan'ny taonjato faha-19. Tompon-tsary: Brian Godfrey/CC by 2.0
Ka raha tokony hanangana endrika mipirina iray, dia nosafidin'i Zewde ny hanangana sehatra, tahaka miaina, “fehezam-pitaovana hoan'ny manodidina iray manontolo.”
Tafiditra ao amin'ny manodidina ny fefiloha vita amin'ny vato antitra izay nodiavin'ny andevo voalohany indrindra rehefa manitsaka ny Tontolo Vaovao ry zareo; tanim-pandevenana tafo lanitra ho an'ireo tsy nahazaka ny dia lavitra na maty raha vao tonga an-tanety; “fitehirizana entambarotra” fantatra ihany koa ho “fanatavezana volomborona” izay amahanana sy hanadiovana ireo andevo mialoha ny ivarotana azy; sy ireo kianja isankarazany ividianana sy hamarotana ireo lehilahy, vehivavy ary ankizy ireo.
Nahita siga telo i Zewde hampifandraisana ny fahatsiarovana ireny andro ireny amin'ny fiarahamonin'ny ankehitriny.
“Iray: endrika fehilamba fotsy. Amin'ny finoana Afro-Breziliana, izay avy any Afrika Andrefana amin'ny ankapoeny, rehefa manamarika zavatra iray amin'ny zavatra fotsifotsy ianao dia mampiseho ny toerana nivorian'ny razana izay. Ary zatra mampiasa izany manodidina ny zavamaniry Afro-Breziliana manana fanahy sy hery betsaka ry zareo. Ary avy amin'izany sady singa faharoa dia ny zavamaniry novidian'ny Afro-Breziliana avy any Afrika. Hazo sy zavamaniry manome fialokalofana, sady ampiasaina ihany koa hampifamatotra ireny toerana ireny amin'ny tantaran-dry zareo.”
“Ny zavatra fahatelo,” hoy izy nanampy, “dia ny tany menan'ny zanapehintany mafana mampiaraka an'i Afrika atsimo-andrefana sy i Rio de Janeiro. Ka ny singa fahatelo dia [rari-]biriky menan'ny tanimanga izay mampiaraka [mampifandray] indray ireo maningatsingana amin'ity tantara ity sy ny manodidina, mamela ny mponina sy ny mpitsidika hahatakatra ny fiitaran'ny indostria eo amin'ny manodidina.”
Ny dikan'ny tetikasam-pandrakofana dia hoe lavitra-akaikin'ny sisim-piantsonana Valongo ankehitriny ny ranomasimbe.
Nahazo fanohanana avy amin'ny biraon'ny benintanana sy ny manampahefana hafa i Zewde. Saingy misy ihany koa ny tsindry hafa mifaninana eo amin'ny manodidina. Te-hahazo birao sy seha-pivarotana bebe kokoa ny tombontsoa ara-barotra. Nisy Tilikambon'i Trump vao nisokatra tao. Henoheno ikarakarana ny lalao ôlaimpikan'i Rio 2016 ihany koa ny toerana. Mbola voatazona ao anatin'ny karazana limby [sampanana mankany amin'ny paradisa na afobe] ara-politika ny tetikasan-tsangambato amin'izao fotoana izao.
Mbola tsy maintsy mandresy ny tsy fahazotoan'i Brezila hiatrika ny lasany ihany koa ravehivavy. Taorian'ny nanafoanana ny fanandevozana tamin'ny 1888, dia niniana nopotehina avokoa ny rakitra ofisialy milaza ny fanandevozana sy ny varotra andevo, ho fiezahana hamafana ny fahatsiarovana. Misy ny toerana manamarika sy ny mozea fahatsiarovana ny fanandevozana. Efa voaafina tanteraka ara-bakinteny kosa ny toera-malazan'ny fanandevozana, tahaka an'i Valongo.
Manahy ireo mpikatroka Afro-Breziliana sao tsy ho azony indray ity toerana nafenina ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/05/77931/
 tao amin'ny PRI.org: http://www.pri.org/stories/2015-12-29/young-american-helping-brazil-memorialize-slave-trade